I-Internet Ministries - Ukuhlola kuqala kwe-Pulpit
UMark N. Posey, Umhleli
UMarku usebenze njengoNgqongqoshe wePulpit e-Austinville Church of Christ kusukela ngo-1994. Uneziqu ezivela e-Freed-Hardeman University, e-Lipscomb University naseReformed Seminary. Ngenkathi eFHU, wayengumamukeli wezifundo zikaGuy N. Woods ekushumayeleni. Ufundise izinga lesikolishi izifundo zeBhayibheli e-Bear Valley Bible Institute, International Christian College, ne-Faulkner University. Uyenze umsebenzi wezithunywa eziqhingini zaseCaribbean naseMpumalanga Yurophu. Ufundisa nokufundisa kabanzi e-Ukraine unyaka ngamunye. Uyashumayela emihlanganweni yevangeli ye-4 kuya kweyisithupha ngonyaka bese ekhuluma ngezifundo zemfundo nobuzalwane. Ungumqondisi ohlangene weviki likaMorgan County eMaywood Christian Camp eHamilton, AL futhi ukhonza ebhodini lokucebisa. Usebenza eduze nehlelo Lads kuya Abaholi.
Ubukhulu Buyisikhombisa Ngothando!
KuNkulunkulu kube yiNkazimulo-Izinto Ezinkulu Ayenzile!
Isizathu Sokuba Simesabe UNkulunkulu!
Indlela Yokwakha Isonto Lendawo Eliqinile!